अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘कास्मिरको विषयमा हामी पाकिस्तानलाई सघाउँछौं, खान मेरा मिल्ने साथी हुन्’: के गर्छ अब भारत ? - Mitho Khabar
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘कास्मिरको विषयमा हामी पाकिस्तानलाई सघाउँछौं, खान मेरा मिल्ने साथी हुन्’: के गर्छ अब भारत ?
January 23, 2020 mithokhabarLeaveaComment on अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘कास्मिरको विषयमा हामी पाकिस्तानलाई सघाउँछौं, खान मेरा मिल्ने साथी हुन्’: के गर्छ अब भारत ?
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कास्मिरका विषयमा अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग भेटेरै यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ट्रम्पले अमेरिका पाकिस्तानलाई कस्मिरको विषयमा मद्दत गर्न तयार भएको बताएका छन्। स्वीजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित ‘वर्ल्ड इकोनोमी फोरम’ वैठकका क्रममा मंगलबार खान र ट्रम्पबीच भेट भएको थियो।
सो धेटका क्रममा ट्रम्पले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । भेटमा ट्रम्पले खान आफ्नो मिल्ने साथी भएको बताए। ट्रम्पले भने,‘हामीले कस्मिरको विषय नजिकै बाट हेरिरहेका छौं। यदी मद्दत गर्न सकिए निश्चित रुपमा हामी पाकिस्तानलाई सहयोग गर्नेछौं।’ सो क्रममा इमरानले पाकिस्तानले जहिल्यै कस्मिरको विषयमा अमेरिकाको भूमिका खोजेको बताए। एजेन्सी
जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न लिबिया सम्मेलनबाट निक्लिएको निष्कर्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले स्वागत गरेको छ । बर्लिन सम्मेलनको निष्कर्षलाई अनुसरण गर्न आगामी दिनहरुमा थप छलफल गर्ने गत जनवरीमा परिषद्को अध्यक्षता सम्हाल्नु भएका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भियतनामका राजदूत दाङ दिन्ह क्वेले बताउनु भएको छ ।
स्थायी यु’द्धविराम सहित राजनीतिक समाधानका लागि सहजीकरण गर्न तोकिएका लिबियाका लागि संयुक्तराष्ट्रका दूत घसान सलामलाई पुनः समर्थन गरेको छ । परिषदका सदस्यहरूले लिबियाका यु’द्धरत पक्षहरुलाई बर्लिन सम्झौता बमोजिम यु’द्धविरामको कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सलामलाई आग्रह गरेका छन् ।
लिबियामा यु’द्धविरामपछि राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले आह्वान गर्नु भएको छ । बर्लिन सम्मेलनका सहभागीहरूबीच द्व’न्द्व समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको, ह’ति’या’रको प्रयोग रोक्ने र शान्ति स्थापनाका लागि सबैले पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
आइतबारदेखि बर्लिनमा शुरु भएको यस सम्मेलनमा टर्की, रसिया र फ्रान्सका राष्ट्रपतिहरूलगायत विश्वका नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो । लिबियामा यु’द्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जर्मन चान्सलर मर्केलको संयोजकत्वमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।